वीर अस्पताल दुवाकोटमै स्थानान्तरणको ग्यारेन्टी गर्छु : नेकपा उम्मेदवार ढकाल(अन्तर्वार्ता) — Bhaktapurpost.com
उपनिर्वाचनको लागि जनताको घरदैलोमा पुग्नुभयो । कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै वडा र भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १० का मतदाताको घरदैलोमा पुग्न भ्यायौं। उक्त अवसरमा हामीले भोट मात्र मागेनौ, चुनावी प्रतिवद्धता समेत राख्यौं । नेकपाकै मेयरको नेतृत्वमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले गर्न सकेका कामका बारेमा सुनायौ । नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका उपलब्धीबारे विपक्षीले फैलाएका भ्रमहरु हटायौं । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित स्वर्गीय जनप्रिय नेता हरिशरण लामिछानेको अधुरो सपना पूरा गर्ने बाचा गर्यौं । मतदाताहरुको हामीप्रतिको अटल बिस्वास र भरोसा देख्दा हामी नतमस्तक भयौं । उहाँहरुले बिजयको लागि मायास्नेह र आशिर्वाद दिंदा हामी थप उत्साहित र जिम्मेवार भएका छौं । नेकपाले यहाँका मतदाताहरुको मन पहिल्यै जितिसकेको अवस्था पायाैँ । मतदाताहरुले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न आतुर भएको भनिरहँदा हामी हर्षित भएका छौं ।
जनताको गुनासो चाहिँ केहि पाउनुभएन ?
विपक्षीले फैलाएका कतिपय अफवाहले जनता निरास देखिएका पायौ । सत्तारुढ दलको उम्मेदवार भएका नाताले विरोधीले फैलाएका भ्रमको सामना गर्नुपर्यो । सरकारले केहि गरेन भन्ने भ्रम हामीले सरकारले गरेका कामबारे जानकारी दिएर हटाउन सक्यौ । बाटोघाटोको समस्या बारे सुनाउनुभयो । हामीले प्रत्येक बाटो बीच गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्यौ । नेताले चुनाव जितेपछि बिर्सनेगरेको किसानहरुले गुनासो गर्नुभएको छ । दलितहरुको उस्तै कुरा छ । बेरोजगारीका कुरा पनि आएका छन् । शिक्षा,स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पहुँचको कुरा छ । धेरै गुनासोहरु हामीले टिपोट गरेर राखेका छौ । हामीले हाम्रो प्रदेश सांसद आदरणीय हरिशरण लामिछाने प्रदेश सभा सदस्य भएको ६ महिनामै गुमाउनुपरेका कारण र अर्का नेमकिपाबाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रेम सुवाल बिकाशको कुरामा सिन्को नभाच्ने भएकाले यो क्षेत्रका कतिपय समस्या हल हुन नसकेको अवगत गरायौ । हाम्रो चुनावी प्रतिवद्धताबाट उहाँहरुको गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
तपाइँले आफूलाई यस क्षेत्रको बिकाशको सम्बाहकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो केवल चुनावी प्रतिवद्धता मात्र हो अथवा तपाइसंग योजना पनि छन् ?
हामीले निर्वाचित भएपछि तात्कालिन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएका छौ । हामीले भनेका छौ नेकपा भनेकै बिकाश हो र विकाश भनेकै नेकपा हो । हाम्रो पार्टीको संघ,प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा सरकार रहेको छ । हामीले बिकाश गर्न सक्ने यो भन्दा बढी आधार जनतालाई के चाहिन्छ र ? हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपालको अभियान शुरु गर्नुभएको छ । त्यसलाई मुर्त रुप दिन सुखी भक्तापुरबासी र समृद्ध भक्तपुर बनाउने अभिभारा हाम्रो हो । म पुन: सबै आदरणीय मतदातालाई बिस्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी भक्तपुरलाई बिकाशको मोडल बनाउने योजना बोकेर आएका छौ । हामीसंग भिजन छ त्यसैले भोटको सहि हकदार पनि हामी नै हौँ ।
नेकपालाई भोट नदिनुस् किनभने नेकपाको सरकारले भत्केकोपाटी–नगरकोट जोड्ने सडकको बेहाल बनाएको छ भनेर प्रतिस्पर्धीले भनिरहेका छन् नि ?
यो बाटाे नेकपाको सरकारले नबनाएको होइन । बिगत ६ वर्षदेखि यो बाटो बन्न नसकेको अवस्था हो । बरु सत्य के हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा उहाँकै जोडबलले यो सडकमा बजेट परेको हो ।
यो बाटो नगरकोट लगेर छाड्ने भनेर बजेट हालेको पनि होइन । नगरकोटसम्मको १५.६६ किलोमिटर पहिलो चरण, त्यसपछि सीपाघाटसम्म ३६ किलोमिटर अर्कोचरण र इन्द्रावतीमा पुल बनेपछि चौतारा र गणेश हिमालको फेदीसम्म पुर्‍याउने रणनीतिक महत्त्वको परियोजना हो ।
हामी आफै पनि यो बाटो समयमै बन्न पर्छ भनेर लागिपरेका छौ । यसलाई ३ महिनाभित्र बनाइसक्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ ।
६ वर्षमा नबनेको बाटो ३ महिनामा कसरी बन्ला ?
यो परियोजनमा भारतीय एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर शुरु गरेको परियोजना हो । यस्ता परियोजना जुन देशबाट ऋण लिएको हो, त्यहिको मुख्य ठेकेदारबाट गराइने प्रकृतीको हुन्छ । नेपाली ठेकेदार सहायक ठेकेदार मात्र हो हो । उसले मूख्य ठेकेदारबाट पैसा नपाएपछि यो रोकिएको रहेछ ।
रकम निकासाको समस्या देखिएपछि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय महेश बस्नेत,चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्र, म लगायत भक्तपुरको हाम्रो सिङ्गो पार्टी पंक्ति लागेर समस्याको हल भयो । घरदैलोका लागि हामीले शिर्ष नेताहरुलाई ल्याएका थियौ । त्यो हाम्रो शक्ति प्रदर्शन थिएन । यहाँको प्रत्यक्ष चित्र शिर्ष नेताहरुलाई प्राप्त होस् भन्ने अभिप्रायले उहाहरुलाई ल्याइएको थियो । हामीले सोचे जस्तै भयो । यहाँ आफ़्नोइ आखाले बाटोको अवस्था देखेपछि उहाँहरुले एक्जिम बैंकसंग पनि कुरा गर्नुभयो । हामी सबैको जोडबलले अब यो बाटो ३ महिना भित्र बन्नेमा हामी विस्वस्त छौ किनभने रोकिएको काम शुरु नै भैसकेको छ ।
यो बाहेक अरु ३ काम भनिदिनुस जो तपाइले प्रमुख प्राथमिकताका साथ् गर्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ
बाटोलाई हामीले विकाशको मेरुदण्डको रुपमा बुझेका छौ । हाम्रो क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएकोले हामी प्रत्येक मुख्य बाटो चौडा बनाइ पीच गर्नेछौ भने सहायक बाटो पनि स्तारोंनती गर्नेछौ । त्यसका साथै हामी पर्या-पदमार्ग पनि प्रसस्तै खोल्नेछौ ।
हामी दुवाकोटमा स्थानान्तरण हुने भनिएको बहुप्रतिक्षित बीर अस्पताल हाम्रै कार्यकालमा ल्याइसक्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दछौं । शिक्षालाई विकाशको मेरुदण्डको रुपमा बुझी सार्वजनिक विद्यालयको रुपान्तरण मार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछौ । त्यतिमात्र होइन उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई महत्वका साथ् अघि बढाई बहुप्राविधिक शिक्षालय र बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्नेछौ । चाँगुनारायणस्थित इञ्जिनियरिङ्ग कजेललाइ जनताको कलेजको रुपमा रुपान्तर गर्नेछौ ।
तपाईले चुनाव जित्ने आधार के ?
पहिलो कुरा यो स्थान नेकपाले नै जितेको स्थान हो । राप्रपा र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त गठबन्धन हुदा पनि धेरै बहुमतले हामीले जितेका हौं । अहिलेको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाइ राप्रपाले समर्थन गरेपनि राप्रपाका राम्रा नेता सहित धेरै जना नेकपा प्रवेश गरिसक्नुभयो ।
दोस्रो कुरा यो निर्वाचन क्षेत्र नेकपाको बलियो निर्वाचन क्षेत्र हो ,संगठनको हिसाबले पनि हामी बलियो छौं ।
तेस्रो कुरा यो चुनावमा अन्य दलले जिते संसदको पछिल्लो बेन्चमा बसेर बिरोध गर्नेमात्र हुन । नेकपाले जिते तीनै तहको सरकार मार्फत बिभिन्न शिर्षकका बजेट ल्याएर यहाँको प्रसस्त विकाश गर्ने अवसर रहन्छ ।
यी तीन कुरा नै मुख्यत हाम्रो जीतको आधार हुन् ।
के त्यसो भए तपाइँ चुनाव जित्ने कुरामा बिस्वस्त हुनुहुन्छ ?
हो, हामी ढुक्क छौ । यस अघि हाम्रै आदरणीय नेता हरिशरण लामिछाने यहाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उहालाई ५ वर्षका लागि दान गरेको मत मतदाताले बीचमै खोस्नु हुन्न किनभने उहाको सपना साकार पार्न नेकपाले जित्नुको बिकल्प नभएको मतदाताले राम्ररी बुझ्नु भएको छ । हामीलाइ मतदाताप्रति विस्रवास छ ।
भक्तपुरको नेकपा एकमतका साथ चुनावमा जुटेको छ । म सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिप्रति नतमस्तक छु । म आम मतदातालाई दुइ हात जोडेर पाँच वर्षका लागि यस क्षेत्रमा नेकपालाइ प्राप्त मतदानको निरन्तरताको लागि अनुरोध गर्दछु ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसद्मा जाने भनेको विरोध गर्न नै हो । नेमकिपाको विजयले यहाँको विकास बिग्रन्छ । कांग्रेसका उम्मेदवार ठेकेदार हुनुहुन्छ । उहाँलाइ भोट होइन, ठेक्का दिनुपर्दछ । नेकपा जनताको पार्टी हो । जनताको भोट यसैले पाउनुपर्दछ ।
हामी भन्न चाहन्छौ- आदरणीय मतदाताज्युहरु कन्यादान भन्दा पून्यको काम मतदान हो । जसरी तपाइँहामी जो पायो त्यसैलाई नठहराई छोरी दिदैनौ त्यसैगरी जो पायो त्यसैलाई मत पनि दिनु हुदैन । सूर्य चिन्हमा मत दिएर सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा साथ् दिनुस् । म हाम्रा स्वर्गीय जनप्रिय नेता हरि गुरुको सपना साकार पार्न र यस क्षेत्रको बिकासको लहर ल्याउन कुनै कसर बाकीं नराखी इमान्दारिताको साथ् लागिरहने प्रण गर्दै सूर्यमा मतदान गर्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी मतदाताहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।
प्रस्तुती : बाबुराम दाहाल / भक्तपुरपोस्ट